नश्लवाद माथि सवार ओली यात्रा - फ्री प्रेस नेपाल
मोदीराजको ठाडो नक्कल
प्रदेश नामकरण र राजधानी निर्धारणमा ‘हेडक्वाटर’ हावी
श्रमिकलाई न दुइ छाक खाना न परिवारसंग बस्ने अधिकार
राज्यले किन गरिरहेकोछ संकटकालको अभ्यास ?
भाइरस भन्दा भोकको डरले सडकमा !
कोरोनाकै गतिमा आतंक प्रसारण नगरौं
कोरोनाको डर भन्दा ग्यास नपाईने चिन्ता
नश्लवाद माथि सवार ओली यात्रा
by प्रदिप गिरी
१६ आश्विन २०७५, मंगलवार १०:४२
नश्लवादमा आधारित खास किसिमिको तानाशाही विश्वभर देखिन्छ । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु मझौला किसिमको राष्ट्र बराबर बलियो भैसकेकाछन् । तिनको हातमा रहेको धन शक्तिले प्रेस, अदालत र जनमतलाई नियन्त्रण गरेर अधिनायकवाद लागु गराउन खोजिरहेकोछ । त्यस्तो अधिनायकवादका लागि सबभन्दा बलियो आधार कुनै न कुनै नश्लवाद आवश्यक छ ।
समाजमा जातिप्रथा छ । जातिप्रथामा टेकिएको लैगिंक बिभाजन, विभेद र दमन छ । सबभन्दा ठुलो हाम्रो समाजको विशेषता छुवाछुत छ । यो हरेक समाजमा हुदैंन । अमेरिकामा काला गोराबीच छ । अहिलेपनि अमेरिकामा ‘फाउण्डिङ फादर‘ हरु मध्ये फादर थोमस जेमर्सनलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, लोकवादी र जनवादी ब्यक्ति मानिन्छ । उनी ३ सय अफ्रिकन दासका मालिक थिए । ति दासहरु मध्ये स्यानी हयामिन्सन भन्ने युवतीसंग उनको शारिरीक सम्बन्ध थियो । उनीबाट बच्चा जन्मिए । ‘डिक्लेरेसन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट’ लेख्ने मान्छे कति अनुदार रहेछन भने स्यानी र उनीबाट जन्मिएका आफ्नै बच्चालाई दासताबाट मुक्त गर्न जिवनको अन्तिम कालमा मात्र कागज गरे । जिवनभर दास नै बनाएर राखे ।
यो मैले किन भनेकोहुँ भने ब्यक्तिको पनि दुईटा सामाजिक अनुहार हुन्छ । हाम्रो संविधानको पनि अर्काे अनुहार छ, जो अहिलेपनि शोषणमा आधारित छ । थोरै शब्दमा भन्न सकिन्छ – सत्ताको हस्तान्तरण भएकोछ तर राज्यको रुपान्तरण भएकोछैन । दुर्भाग्यपूर्वक के सोध्नु परिरहेकोछ भने हरेकपटक यस्तो किन हुन्छ ?
सत्ताको हस्तान्तरण हुन्छ । श्री ३ मोहन शमशेरको ठाउँमा श्री ३ मातृका प्रसाद कोइराला ज्यू आउनुहुन्छ । जनताको छोराबाट पहिलो प्रधानमन्त्री । उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री भैसकेपछि मातृकालाई राजा त्रिभुवनले सोधे – तिमीलाई के उपहार दिऊ त ? मातृकाले भन्नु भो – ‘जनरल पनि पाऊँ हजुर ।’ ७ सालका क्रान्तिका जननायक मातृकालाई मेजर जनरल उपाधि बख्स भयो । लेफ्टिनेन्ट जनरल दिन सकिन्थ्यो तर मेजर जनरल दिईयो । आर्मीको हायर्कीमा मेजर जनरल भन्दा लेफ्टिनेन्ट जनरल माथि हुन्छ ।
यो घटना सुनाउँदै मलाई किसुनजीले भन्नुभयो – बिदेशी कुटनीतिक पाहुना आउँदा अरु सिविल ड्रेसमा गए मातृका चाहिं मेजर जनरलकै ड्रेसमा जानु भएछ । समस्या के पर्यो भने मेजर जनरलले त लेफ्टिनेन्ट जनरललाई स्यालुट गर्नुपर्यो । हिंजो सम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफुलाई स्यालुट गरिरहेको लेफ्टिनेन्ट जनरललाई उहाँले स्यालुट गर्नु भयो । त्यो स्यालुट नै उहाँको पहिलो र आखिर स्यालुट थियो । यो उहाँमा रहेको असाध्यै भित्री इच्छा जागृत भएकोथियो । यो हाम्रो प्रवृत्ति हो ।
सबै शासित देश र पराधिन देशको नेतृत्व वर्ग जहिल्यै के गर्छ भने उ आफ्नो माटो, आफ्नो समाज, आफ्नो संस्कृतिका आधारमा आफ्नो ब्यवस्था बनाउँन चाहँदैन । प्रभुत्व वर्ग जोसंग उ लड्दैछ । जसबाट उ पीडित छ । त्यो जाति जसबाट उ उत्पीडित छ । शासनमा जानासाथ उ त्यहि प्रभुत्व वर्ग बन्न खोज्दछ । त्यसकै सिको गर्दछ । प्रसिद्ध फ्रेन्च क्रान्तिकारी जेन रिचार्ड ब्लोचले आफ्नो कृतिमा बिस्तारमा खुलाएर लेखेकाछन् – ’कसरी उपनिवेशवादी शोषणमा रहेका देशहरु त्यसबाट मुक्त भएर शासक हुनासाथ तिनले लुगा लगाउने तरिका, खाना खाने तरिका, टेबलमा बस्ने तरिका, अग्रेंजी बोल्ने तरिका सबै दुरुस्त कपी गर्छन । गोरा हटेपछि नवगोरा बन्न चाहन्छन् । ‘ हाम्रो पनि समस्या हो यो ।
ओलीलाई श्री ३ भैहाल्नु परेकोछ । शेरबहादुरको चिन्ता त्यतै छ । विपी कोईरालालाई पनि त्यो थियो । काग्रेंस बलियो हुनासाथ सप्पैले राणाको छोरी विवाह गर्ने । तपाईहरुले बिचार गर्नुभएकोछ यो ? सात सालपछि सत्तामा आउने बित्तिकै हाम्रा झर्रा काग्रेंसहरुले राणाका छोरी बिवाह गरे । एमाले भूमिगत बसेका बेला सबै जनजाति नेवारका छोरी बिवाह गरे । यसरी बिहेवारी गरेपछि अब ब्राम्हाणवाद कम होला भनेको झन यीनै बढी ब्राम्हाणवादी भएर निस्किए । ध्यान दिनु होला यो बडो बिचारणीय कुरो छ ।
मधेसका नेताहरुलाई बिवाह गर्नपनि पहाडीया नै चाहिंदो रहेछ । सबै शोषित उत्पीडितका नेताहरुलाई आफु भन्दा माथिल्लो वर्ग सम्झिएको समुदायको स्त्रीसंग बिवाह गर्नुपर्ने । आफु भन्दा माथिल्लो जाति सम्झिएकोसंग सम्बन्ध जोड्नुपर्ने । । राजधानीको एलिट बन्न राजधानीमा नातागोता बढाउनुपर्ने ।
मैले पढेको थिईन काफी राम्रो लेख लाग्यो सरिता परियारको । उनले टंकप्रसाद आचार्य सम्बन्धि एउटा प्रसंग लेखेकिछन् । आचार्यलाई जातच्यूत गरि अछुत बनाइएपछि राणासंग बिन्ति गरेर उनले अर्थाेक सबै गएपनि मेरो जात नजाओस् भनेर बिन्ति हालेछन् । त्यत्रो क्रान्तिकारीलाई बाहुनको जात जाला भन्ने पीर । त्यसैले हाम्रो समाजको नेतृत्वको जुन कथा छ ,त्यो कदाचित ममाथि पनि लागु होला । तपाई माथि पनि होला । त्यो वर्गले एकदमै ठुलठुला कुरा गर्दागर्देपनि आगो ओकल्दा ओकल्दैपनि कहिं भित्र हाम्रो हिनत्वबोध र तथाकथित ठुलो मान्छे बन्ने अभिलाषा छ । भंयकर क्रान्ति गर्दापनि जात नजाओस भन्ने पीर छ । अग्रेंज गएपनि अग्रेंजकै जस्तो खानपान चलोस भन्ने ईच्छा छ ।
यो काठमाण्डौमा मात्र भएको जनकपुरमा मात्र भएको नयाँ कुरा पनि होईन । यसमा पनि चिन्तकहरुले लेखेकाछन् । क्रान्तिको प्रक्रिया कसरी हुन्छ र ठुलो क्रान्तिकारी कसरी बिग्रन्छ भन्ने बारे ब्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भएपनि ‘एनिमल फर्म ‘ जस्ता किताब छन् । कसरी ब्यवस्था बदलिन्छ । ब्यवस्थाको नेतृत्वले पुरानालाई कसरी हटाउँछन् । कसरी ति कुर्सीमा जान्छन् र कसरी तन्त्र फेरिन्छ । यसमाथि ब्यवस्थाको आलोचना गर्नुहुने हाम्रा बुद्धिजिवीहरुले बारम्बार लेख्नुभएकोछ, अहिलेको ब्यवस्था लोकतन्त्रको नाममा अल्पतन्त्र हो । हामी एकतन्त्रबाट अल्पतन्त्रमा बामे सरेका मात्र छौं । साँचो अर्थमा हामी जनतन्त्रमा पुगिसकेकाछैनौं ।
यो संविधान किन र कसरी लेखियो भन्नेबारे बिद्धान सीकेलालजीले दमननाथ ढुंगानाजीलाई कोट गर्दै भन्नुभयो – उमेर र बिरामीले गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालालाई यथाशाीघ्र संविधान बनोस् र म ‘फादर अफ नेसन बन्न सकु’ भन्ने आतुरता थियो । त्यहाँ भन्दा बढ्ता केहि थिएन । संविधान भनेको केहो ? यसको मर्म के हो ? त्यो कस्तो प्रकारले लेखिन्छ ? विश्वमा लेखिएका संविधानका अन्तरकथा के कस्ता छन् ? म ढुक्क भन्न सक्छु त्यसमा उहाँले ध्यान दिनु भएकोथिएन ।
ईतिहासमा अमर हुने अभिलाषा उहाँमा पनि थियो । त्यसैले उहाँ संविधान चाँडै लेखियोस भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । कामरेड ओलीलाई जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न हतार थियो । त्यसका लागि संविधान यथाशीघ्र चाहिएकोथियो, बन्यो । दमननाथजीले भन्नुभयो । सीकेलालजीले दोहोर्याउनु भयो । म त्यसमा पूर्ण सहमत छु ।
तेश्रो ब्यक्ति प्रचण्डजीलाई उन्मुक्ति चाहिएकोथियो । पूर्ण उन्मुक्ति त अहिलेपनि उहाँले पाईसक्नु भएकोछैन । माओवादीमा उदारवादी मानिएका बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिकामा कालो झण्डाले स्वागत भैरहेकोछ । यस्तोबाट उहाँलाई उन्मुक्ति चाहिएकोछ । शेरबहादुरजीलाई ‘म प्रधानमन्त्री होईन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात ‘ भन्ने थियो । त्यसैले जुन गम्भीरतापूर्वक संविधान लेखिनुपथ्र्याे, लेखिएन ।
अमेरिकाको संविधान लेखकहरु एकसेएक धुरन्धर थिए । सम्पन्न देशका ‘फाउण्डिङ फादर‘ हरु उर्लिएर संविधान लेखेकाथिए । तिनले धारा धारा बहस गरेर सामुहिक रुपमा संविधान लेखे । हामीले नेपालको संविधान लेखकहरुबाट त्यस्तो आश गर्नु हुदैंन । त्यसका लागि हामीले नेताहरुमाथि सहानुभूति राखिदिनुपर्छ । हाम्रा नेताहरुले आईए पनि जेलबाट गरेकोहो । जेलबाट गरेको मतलब बुझ्नु भो ? त्यसैले संविधानको भाषा संविधान अनुकूल भएन ।
सीकेलालजीले संविधानमा एनजिओको भाषा छ भनेर एनजिओको अपमान गर्नु भो । मेरो आपत्ति छ । (हाँस्दैं ) संविधानको भाषा एनजिओको भन्दा पनि तल्लो स्तरको छ । संघीय राज्यको मान्यता बमोजिम केन्द्रमा अन्र्तनिहित शक्ति तल्लो निकायलाई निक्षेप गरिन्छ । यो संघीयताको मर्म हो तर हाम्रो संविधानमा यो नै छैन । अमेरिका बेलायत भारत सबै ठाँउका संविधानमा विमति हुन्छन् । तर संविधान बनाईदा समाज बुझेर र विश्वका दृष्टान्ट पढेर बाह्य आदर्शका आधारमा बनाईने गरिन्छ ।
सम्राट नेपोलियनको नाम लिनासाथ आजका बुद्धिजिवीहरुलाई के लाग्छ भने उनी बडो महत्वाकाँक्षी र तानाशाह थिए । सम्राट नेपोलियनको एकदम नेक इरादा थियो । क्रान्तिकारी नेपोलियनले सोंचे । जनरल नेपोलियनले सोंचे – ‘सबै राजाहरुले मलाई विरोध गरेकाछन् । यो राजा होईन यसले राजतन्त्र सखाप पार्यो भनेकाछन् । अष्ट्रेलियाको सम्राटले पिछा गरेकोछ । जर्मनीकोले पीछा गरेकोछ । स्विडेनले पीछा गरेकोछ । हल्याण्डकोले पीछा गरेकोछ । मै राजा भैदिएपछि त झगडा सिद्धिएला नी ?‘ नेपोलियनले बडो प्रष्ट लेखेकाछन् – मैले यसकारण राजा हुने बिचार गरे किनकी म राजतन्त्रसंग सम्झौता गर्न चाहन्छु । अब म मुलुकको बिकास गर्न चाहन्छु । त्यसैले नेपोलियनले फ्रान्समा बिकास गर्न सम्राट बने । के बिकास गर्ने अधिकार नेपोलियनलाई थिएन ?
त्यत्रो सचेत त्यस्तो अध्ययनशाील त्यस्तो जागरुक एकहदसम्म आर्मी जनरलको रुपमा खुल्ला र लोकतान्त्रिक जनरल जसले आफ्नो भन्दा ६ गुणा ठुलो फौजलाई हराएकाथिए । उनले तोप र बन्दुकको सहाराले हैन आफ्ना सहयोगीको सहाराले तिनलाई हराएकाथिए । ति सहयोगीसंग उनको अत्यन्त मानवीय ब्यवहार हुन्थ्यो। पछि तिनै तानाशाह बने ।
यो जुन परिपाटी हो । बारम्बार ब्यवस्था फेरिन्छ र तानाशाह आउँछ, नष्ट हुन्छ जसरी नेपोलियन नष्ट भए । त्यसपछि प्रजातन्त्र कायम हुन्छ । त्यो प्रजातन्त्र पनि नष्ट हुन्छ । त्यो प्रजातन्त्रपछि गणतन्त्र आउँछ । त्यो गणतन्त्र पनि नष्ट हुन्छ । फेरि उनकै भतिजो नेपोलियन थर्ड सत्तामा आउँछ । यो दुई अढाई सय बर्षमा जतिपनि क्रान्तिहरु आए । नेपालमा मात्र ओली आएको होईन । हामीले बिर्सनु हुदैंन । फ्रान्सेली क्रान्तिको त्यत्रो प्रभावका बावजुद रप्स पीयर र त्यसपछि नेपोलियन सम्राट सम्मको यात्रा कसरी हुदैं गयो हेर्नुपर्दछ ।
क्रान्तिको इतिहास पढ्दा क्रान्तिको प्रक्रियामा मुठ्ठीभर ब्यक्तिले सत्ता कब्जा गर्छन । क्रान्तिका आदर्शवादीहरु सत्ताको दुष्चक्रबाट बाहिरिन्छन् । किनभने यो राजनीति भन्ने चीज नै धेरै संवेदनशील धेरै भावुक मान्छेले गर्ने चीज होईन । भावुक र संवेदनशील मान्छे यसमा कुनै न कुनै चरणमा पिसिन्छ पिसिन्छ । यसको अर्थ क्रान्तिकारी निराश हुनुपर्छ भन्ने होईन । प्रश्न भावुकताको पनि होईन । तपाईले समर्पण गर्ने बित्तिकै जनताले समर्पण गर्देनन । युवाले समर्पण गर्देनन । यो बुझ्ने हो भने अवस्था धेरै निराशापूर्ण छैन ।
यो मैले किन भनिरहेकोछु भने सारा सवालको उत्तर एक दिनमा पाईंदैन । बर्षमा पनि पाईंदैन । कदाचित एक पुस्तामा पनि पाईदैंन । हामी यो दिनका लागि लडेका थिएनौं । जब जब परिवर्तन हुन्छ । कवि, संवेदनशील र इमान्दार ब्यक्तिले जहिल्यै वरिपरि हेर्छ । खासगरि भारत जस्तो मुलुकमा आजको जमानामा । नेपाल जस्तो मुलुकमा आजको समयमा । समग्रमा भन्दा तेश्रो विश्वमा जो दुई सय बर्ष देखि गुलामीमा बाँचिरहेकोछ ।
आफ्ना देशबासीले गुलाम बनाएर राखे । बिदेशीले गुलाम बनाएर राखे । पतिले गुलाम बनाएर राखे । पिताले गुलाम बनाएर राखे । जुन समाजमा हामीहरु बसिरहेकाछौं, यो समाजमा यस्ता यस्ता प्रश्नहरु उठ्छन् । त्यसैले हामीले यस्ता प्रश्नहरुलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरालाई ब्यवस्थित रुपले सोंच्नुपर्दछ ।
यसपछि वास्तविक प्रश्न आउँछ । यो साईकल जुन कमसेकम चार पाँच सय बर्षको छ । आधुनिकयुगमा सबैभन्दा बढी फ्रान्सेली क्रान्तिले प्रभावित गर्यो। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले गरेको जुन विम्व हो, मिथक हो । त्यो विम्व र मिथकले सोभियत संघको बोल्सेभिक क्रान्तिलाई प्रभावित गर्यो । हामीले क्रान्तिका कुरा गर्दा जुनसुकै पार्टीको, जुनसुकै आन्दोलनका, जुनसुकै पुस्ताका आन्दोलनकारी यदि अलिकता अध्ययनशील छ भने उ माक्र्स र लेलिनबाट प्रभावित भएकै हुन्छ । यो मेरो ब्यक्तिगत विश्वास हो । त्यसलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ भन्ने छैन तर क्रान्ति के हो भन्ने समझदारी प्राप्त गर्नका लागि माक्र्सवादलाई आत्मसात गरेर माक्र्सवादप्रति लेलिनको योगदान र माओको प्रयासलाई आत्मसात गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
तपाईं ‘प्री माक्र्सवादी’ होईन ‘पोस्ट माक्र्सवादी’ बन्नसक्नुहुन्छ । तपाईंलाई थाह छ म आफुलाई माक्र्सवादी भन्दिन । तर मलाई लाग्छ माक्र्सलाई नबुझी क्रान्तिलाई बुझ्न सकिदैंन ।
खतरनाक नश्लीय राजनीति
नश्लवादमा आधारित खास किसिमिको तानाशाही विश्वभर देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको नाम पुछारमा आउँछ । मोदीबाट शुरु गर्नाेस् । मोदीको सम्पूर्ण तन्त्र कहिंनकहिं प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नश्लवाद, धर्मवाद र सम्प्रदायवादबाट प्रेरित छ । ट्रम्पलाई हेर्नाेस । पुटिनलाई हेर्नाेस् । समृद्ध र समावेशी ठानिएको पश्चिमी युरोपमा इमिग्रेसन मुद्दालाई लिएर फाँसीवादी पार्टीहरुले टाउको उठाईरहेकाछन् । लन्दनमा बसेर आएका मान्छेलाई सोध्नोस् कसरी त्यहाँको सहिंष्णुता समाप्त हुदैंछ, अमेरिकामा त्यहि भैरहेकोछ ।
नश्लवाद साँच्चिकै खतरनाक छ । हाम्रो पार्टीले चुनावमा अधिनायकवाद भनेर जुन नारा उठाएकोथियो त्यो विश्वस्नीय थिएन । कस्तो अधिनायकवाद ? राजा महेन्द्रले पुष १ गते कू गरे जस्तो अधिनायकवाद अब आउँदैन । नेपोलियनले सैन्य कब्जा गरेजस्तो अधिनायकवाद अब आउँदैन । यो बुझ्नु पर्यो । अमेरिका र बेलायतमा किताब लेखिदैंछन्, ‘अब अधिनायवादको नयाँ शैली आउन थाल्यो ।’
अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु मझौला किसिमको राष्ट्र बराबर बलियो भैसकेकाछन् । तिनको हातमा रहेको धन शक्तिले प्रेस, अदालत र जनमतलाई नियन्त्रण गरेर अधिनायकवाद लागु गराउन खोजिरहेकोछ । त्यस्तो अधिनायकवादका लागि सबभन्दा बलियो आधार कुनै न कुनै नश्लवाद आवश्यक छ ।
धेरै टाढाको उदाहरणमा किन जानुहुन्छ । भारतमा मोदीजीको लोकप्रियता निकै घट्दो छ । पार्टी भित्र पनि घट्दैछ, पार्टी बाहिर पनि घट्दैछ । उहाँको शौभाग्य केछ भने उहाँको बिकल्प प्रतिपक्षमा देखिइराखेकोछैन । तर मोदीजीको लोकप्रियता जति घटेपनि उहाँले पाकिस्तानमाथि हमला गरिदिनुभयो भने रातारात लोकप्रिय बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । हिटलरले कुनै यहुदीलाई घृणा गरेर राजनीति गरेकोलाई उचित भन्न अप्ठेरो छ । तर तर्साईदिएपछि ‘दुश्मनी’ भनिदिएपछि दुश्मनको बिरुद्ध तपाईं एक हुनुहुन्छ ।
जब कुनै एउटा समुदायलाई घृणाको शिकार बनाइन्छ, त्यो घृणाको शिकार बन्ने समुदाय शिकार गर्ने समुदायकानिम्ति कतिपय अवस्थामा लाभकारी हुन्छ । अहिले मधेसलाई नश्लवादी राष्ट्रवादले कावु बनाएकोछ । यो कुनै बौद्धिक बिश्लेषण होईन । यो मैले किताब पढेर भनिरहेकोछैन । अनुभूतिको कुरा हो । मैले भोगेको कुरा हो । समूहभित्र बसेर कुरा गर्दाको प्रतिक्रियाको जानकारी हो यो ।
म पहाडिया भएपनि धेरै समय भारत बसे, पढे त्यहाँ हुर्किए। कहिलेकाहिं नितान्त शोकले धोती कुर्ता लगाउँथे । धोती कुर्ता लगाउँदा कस्तो विभेद हुँदोरहेछ भन्ने यथार्थ मैले २०२१ सालमा काठमाण्डौमा भोगेको हुँ । त्यस घटनाबारे म यहाँ बिस्तृतमा जान चाहन्न । तर त्यतिबेला मलाई लागेको के हो भने ‘अहो विभेद यति चर्काे रहेछ ? आफु विभेदको शिकार नहुँदा सम्म मलाई कहिल्यै विभेद यो स्तरको हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । शायद विभेदको पीडा अर्काेले बुझ्दैन । म स्विकार गर्छु – म पनि बुझ्दिन ।
त्यसैले मधेसका मुद्दा अहिलेका शासकले बुझ्दै बुझ्दैनन । मधेसी राज्यबाट त बहिष्कृत छ नै । तर जसले मधेसबारे लेखिरहनुभएकोछ, उहाँहरुबाट पनि मधेस बहिष्कृत र तिरस्कृत छ । यो मैले बिश्लेषण दिईरहेकोछैन प्रत्यक्ष जानकारीको आधारमा सुचना दिईरहेकोछु ।
हामी पुरुष वर्गले जस्तै ठुलठुला कुरा गरेपनि हामी नारीको पीडा बुझ्न सक्दैनौं । एकदिन हाम्रो संसदमा मधेस र पहाडको कुरा चलिरहेकोथियो । अब त मधेसलाई पुग्यो । उपेन्द्र यादव उप–प्रधानमन्त्री भैसके । तपाईं अझै किन मधेस मधेस भन्दै बस्नुहुन्छ ? भनेर एउटा समूहले भन्यो । त्यहाँ दुई चार जना सभ्रान्त पढेलेखेका महिलाहरु पनि थिए । एकदम क्रान्तिकारी महिला । मैले उनीहरुलाई सोधे – ‘तपाईहरुको पीडा तपाईको श्रीमान र मैले बुझ्न सक्छु ? तपाईलाई मासिवश्राव हुँदा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?‘ उनको जवाफ थियो – ‘मलाई केहि पनि लाग्दैन ।’ एकछिन उनले सोंचेर भनिन – तर मन्दिरमा जान चाहिं डर लाग्छ । त्यसैले महिलाको पीडा पुरुषले बुझ्दैन भनेको हुँ । गान्धीले पागल जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो । म महिलालाई बुझ्न अर्धनारीश्वर बन्न चाहन्छु भन्नुहुन्थ्यो ।
समृद्धिको भ्रान्त मोडल
बिकास र समृद्धिको जुन भ्रान्त मोडेल छ । यो भ्रान्त मोडेलले पनि आजको समस्या खडा गरिरहेकोछ । उत्पीडनलाई बिकासको तथाकथित मोडेलले झन बिगारेकोछ । भेदभावलाई बिकासको मोडलले झन बढाएकोछ । लैंगिक असमानतालाई बिकासको मोडेलले झन बढाएकोछ । १९०३ मै गान्धीले भनेकाथिए – ‘हामीले भारतलाई बेलायत जसरी बिकास गर्न सक्दैनौं । जर्मनी बनाउन सक्दैनौं । त्यसको बिकास गर्न चाहिने फलामे खानी, पेट्रोलियम पदार्थ, अन्य खनिजहरु र उर्जा हामीसंग छैन । यस्ता बिकासको मोडलका लागि श्रम हटाउनुपर्छ । श्रम हटाउन पूँजि चाहिन्छ । त्यो पूँजी हामीसंग छैन । भारत बेलायत जस्तो बन्ने हो भने दशवटा भारतले पनि पुग्दैन ।
विकाशको पश्चिमा मोडेल हावी भएको र भूमण्डलीकरणले गाँज्दै लगेका हाम्रा नेता कहिले देशलाई सिंगापुर बनाउँछौ भन्छन्, कहिले स्विट्जरल्याण्ड । कहिले सुपरजेट उडाउने कुरा गर्छन, कहिले बिजुलीको रेल दौडाउने भन्छन् । अहिले हामीसंग बिकासको जुन मोडेल छ । मान्छे बस्तुका पछाडि जसरी लालायित भैरहेकाछन, चीनमा एउटा युवकले आईप्याड किन्न आफ्नो किड्नी समेत बिक्री गर्छ । हामीमाथि थोपरिएको यो मोडेलले हाम्रा सबै परम्परागत बिसंगतिलाई, परम्परागत उत्पीडनलाई शोषणलाई झन बढाएकोछ । त्यसैले बिचारधारा र चिन्तनको क्षेत्रमा पनि नयाँ किसिमले सोंच्नुपर्ने बेला भएकोछ । सबैभन्दा जान्नुपर्ने के छ भने अहिले गणतन्त्रको प्रयोगको नाममा, लोकतन्त्रको प्रयोगको नाममा अहिलेपनि उत्पीडक वर्गले रचनात्मक वर्गमाथि शासन गरिरहेकोछ ।
पार्टी सभापति भएपछि, प्रधानमन्त्री बनेपछि आफुलाई भगवान श्रीकृष्ण भन्दापनि ठुलो मान्छे सम्झिन थालिएकोछ । भगवान कृष्ण जसरी हरेक कुरामा श्रेष्ठ थिए, त्यस्तै नेतामा ओली भन्ने अवस्थामा देश पुगेकोछ । यस्तो मनस्थितिसंग लड्ने दायित्व बुद्धिजिवीहरुको हो । तपाईंले भन्नुपर्छ, उत्पीडक वर्गको कुरा हामी मान्दैनौं र हामी ‘क्रियटिभ क्लास’ हौं । चित्रकारको रुपमा, लेखकको रुपमा, कवि, संगीतकार, नृत्यकार, लेखक, अभियन्ताको रुपमा हामी तपाईं बिरुद्ध छौं ।
समाजको यस्तो परिवर्तनको प्रक्रियालाई बुद्धिजिवीले नेतृत्व गर्न सक्दछ । सामाजिक कार्यकर्ताले गर्न सक्दछ । सिंगो राजनीतिले समाज कहिल्यै बदल्न सक्दैन । मलाई आज यस उमेरमा आईकन लाग्दछ, मैले कहाँ गल्ति गरे ? चेतनाको स्तरमा मैले राजनीति संगसंगै सामाजिक र रचनात्मक स्तरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने बौद्धिक रुपमा बुझेकोथिए । हुन त म थुप्रैपटक जेलपनि बसें तर यदि साँच्चिकै समाज परिवर्तन गर्नुछ भने राजनीति र रचनात्मक कार्य दुबै गर्न जरुरी छ ।
शक्तिनीति र बौद्धिक क्रान्ति गर्नु जरुरी छ । मेरो निश्चित विश्वास छ , कुनैपनि राजनैतिक आन्दोलन एउटा राजनैतिक मूल्य मान्यता र बिचारधाराको अभावमा त्यो आत्मघाती हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्दैन । मधेस आन्दोलन पहिचानको लडाई मात्र होईन । भूखण्डको लडाई मात्र होईन । मधेसले आफ्नो आन्दोलनका लागि सिंगो नेपाललाई नेतृत्व गर्नुपर्छ । सबै उत्पीडनलाई पक्रनुपर्छ । चाहे त्यो महिलाको होस । चाहे त्यो दलितको । दलितको कत्रो ठुलो समस्या छ ।
त्यसका लागि यस्तो विचारधारा, यस्तो मूल्यबोध, यस्तो सोंच जसले दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य उत्पीडितलाई जोडेर समग्र विचारधारा देओस् । त्यो समग्र बिचारधारा म बिनम्रताका साथ भन्छु, केहि अपवादलाई छाडेर माक्र्सवादको परम्परामा छैन । ‘समाज बदल्न जरुरी छ । बौद्धिक क्रान्तिको बेग्लै जरुरी छ । तर सत्ता प्राप्त गरेर मात्र त्यो हुदैंन ।’ यो बिचारलाई रोजा लक्जमवर्गले राजनीति भाषामा राम्ररी ब्यक्त गरेकिछन् । त्यस्तो समग्रताको बिकास गर्न नयाँ शीराबाट हामीले चिन्तन थाल्न जरुरी छ ।
(संविधान दिवसको अवसरमा वीरगन्जमा आयोजना गरिएको ‘ संविधान २०७२ मा जनताको अवधारणा ः राष्ट्रिय बहस र मन्थन’ मा ब्यक्त बिचारको सम्पादित अँश । ‘सानो पाईला र सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एण्ड फेड्रालिज्म’ ले आयोजना गरेको विमर्श कार्यक्रममा देशभरका बौद्धिक ब्यक्तिहरुले आ–आफ्ना धारणामाथि सामूहिक मन्थन गरेकाथिए । )
Tags: issue-2Pradeep Giriअंक-२प्रदिप गिरी
लकडाउन ३ दिन : मान्छेहरु सरकारको कुरा काट्न थाले
पत्रकारद्वारा संचालित सेन्सरसीपमुक्त अनलाईन म्यागेजिन।
Copyright © 2018-19 Free Press Nepal.